Anyị Social Ibu Ọrụ na Social Media | Martech Zone
Ma ọ masịrị gị ma ọ bụ na ọ masịghị gị, dịka ụlọ ọrụ gị bidoro iwu mkparịta ụka na soshal midia ị nwere ibu ọrụ. I nwere ọrụ dịrị ndị na-ege gị ntị na ụlọ ọrụ gị ịkwado ogo nke mkparịta ụka ndị ahụ. Akpọrọ m asị na ị gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ isi ma hụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ụgha, trolls na spammers weghaara ibe. Ọ na-agwa m na ịgbakwunye olu m na ngwakọta bụ nke enweghị uru maka nzukọ.
A gbara m ajụjụ ọnụ n'izu a site WIBC, ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara. Isiokwu nke mkparịta ụka bụ asịrị dị egwu na achọtara ozu nwa akwụkwọ IU bụ Lauren Spierer. Ọ bụghị eziokwu, ma ụgha ahụ gbasara ka ọkụ ọgbụgba.
[ọdịyo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2012/01/11812_afternoonnews_netrumorsspreading.mp3 | titles = WIBC Internet Rumors]
Ọ bụ ihe nwute na ụgha na-agbasa… ọbụna karịa mgbe ụfọdụ karịa eziokwu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere blog na nkwupụta, ibe Facebook, akaụntụ Twitter ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ maka ndị ọrụ na-ekwu okwu, ị nwere ibu ọrụ iji belata mkparịta ụka ahụ. I nwere ibu ọrụ ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ gị, kamakwa ndị na-ege gị ntị.
Gbochie ma kọọ spam na-ezigara na akaụntụ Twitter gị (dekọọ ha @igboamaka). Akwadola ọdịnaya nke ụgha, na-emebi ihe ma ọ bụ na-emekpa mmadụ arụ. Ma maa okwu n ’ịntanetị aka maka ọdịmma gị kachasị mma - dị ka mmadụ ịkatọ ụlọ ọrụ gị ụgha. Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị mmadụ ga-agbachitere ụlọ ọrụ na-agbachitere onwe ya n'ụzọ ziri ezi. Ma, ọ bụrụ na ihe ọ bụla dara, gbanyụọ okwu. Enweghi mkparịta ụka kariri inye ụfọdụ troller na onye na-ajụ ase iji mebie aha gị.
N'ihe banyere Lauren Spierer, mmebi ahụ karịrị aha ụlọ ọrụ. Dịka onye ọrụ nke mgbasa ozi mmekọrịta, enwere m olileanya na ị ga-ewere ya n'onwe gị ịma aka ụgha, asịrị, trolling na iji ike emegbu mmadụ na ịntanetị. Nnukwu arụmụka bụ otu ihe… mana ịgbasa ịkpọasị na enweghị afọ ojuju bụ ihe onye ọ bụla n’ime anyị ekwesịghị ịnabata.
Ikpeazụ kwuru: Ekwetaghị m mgbochi gọọmentị okwu ịkpọasị ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ekwenyere m na olu ndị ahụ, agbanyeghị na-asọ oyi, ọ dị mkpa ka a nụ ma lelee ha. Mana ọ gaghị eme na akụ m ma ghara ime na nke gị.
Tags: asịrị ịntanetịonye na -ekwu okwu laurenasịrị twitter
Delivra weputara weebụsaịtị ohuru
Jan 21, 2012 na 2: 43 AM
Oge mbụ ebe a, na inwe obi ụtọ!
O mere di na nwunye na ndi na-ede blọgụ m jidere n'ụzọ na-akpasu iwe site na onye na-agụ iwe iwe, ịkpa oke mkparịta ụka dị ezigbo mkpa n'okwu a!
Debe Podcast ahụ Douglas, ihe dị mma!